Nicholas Haysom oo fariin gaar ah u jeediyay dhibbanayaasha qaraxii 14kii Octobar. – XOGMAAL.COM
Nicholas Haysom oo fariin gaar ah u jeediyay dhibbanayaasha qaraxii 14kii Octobar.
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay (SRSG) u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Haysom, ayaa muujiyay sida uu u garab taaganyahay dhibbanayaasha qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu baaba’ay ee sannad ka hor ka dhacay bartamada magaalada Muqdisho. Ergeyga Gaarka ah ayaa sidaa sheegay mar uu maanta ka hadlay xaflad koobnayd oo lagu qabtay xarunta weyn ee Qaramada Midoobay ee caasimadda Soomaaliya.
“Anngoo maalintan xusuusanayna dadkii geeriyooday, waxaan ugu baaqayaa xoogagga kooxaxa xagjirka ah inay ka haraan inay walxaha qarxa hub ahaan ugu adeegsadaan dagaalka fallaago,” ayuu yiri Mudane. Haysom. “Weerarrada qaraxyada oo aan loo meeldayin awgood, sida caadada ah dhibbanayaashu inta badan waa dad rayid ah oo aan waxba galabsan — oo isugu jira rag, haween iyo carruur. Ma jirto wax ujeeddo siyaasadeed ah oo weligeed lagu gaari karo dil aan loo meeldayin oo loo geysto dad rayid ah.”
Agaasimihii Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya ayaa shaqada ka tegay